လက်ထပ်ပြီး သုံးလကြာမှ ခင်ပွန်းသည်က အဖိုးဖြစ်နေမှန်း သိလိုက်ရတဲ့ ကောင်မလေး | Buzzy
လက်ထပ်ပြီး သုံးလကြာမှ ခင်ပွန်းသည်က အဖိုးဖြစ်နေမှန်း သိလိုက်ရတဲ့ ကောင်မလေး
အင်တာနက်ကနေ တွေ့ပြီး ချစ်ကြိုက်ခဲ့ကြတာပါ
အသက် ၂၄ နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးတစ်ဦးနဲ့ အသက် ၆၈ နှစ်အရွယ် အမျိုးသားတစ်ဦးဟာ လက်ထပ်လိုက်ကြပြီး အိပ်ထောင်သက် သုံးလကြာမှ သူတို့ဟာ မြေးအဖိုးတော်စပ်မှန်း သိလိုက်ရပါတယ်။
အသကျ ၂၄ နှဈအရှယျ အမြိုးသမီးတဈဦးနဲ့ အသကျ ၆၈ နှဈအရှယျ အမြိုးသားတဈဦးဟာ လကျထပျလိုကျကွပွီး အိပျထောငျသကျ သုံးလကွာမှ သူတို့ဟာ မွေးအဖိုးတျောစပျမှနျး သိလိုကျရပါတယျ။
သူတို့နှစ်ဦးဟာ အင်တာနက်က ဖူးစာရှင်ရှာဖွေရေး ဝက်ဆိုဒ်ကနေ တစ်ဆင့်တွေ့ဆုံပြီး လက်ထပ်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ သူတို့နှစ်ဦးဟာ ငယ်စဉ်ကတည်းက တွေ့ဖူးခြင်း မရှိကြတဲံ မြေးအဖိုးတွေပါ ။ လက်ထပ်ပြီး သုံးလအကြာမှာ ငယ်စဉ်က မိသားစု ဓါတ်ပုံတွေ ကြည့်ကြရာကနေ သူတို့နှစ်ဦးဟာ မြေးအဖိုးတော်စပ်နေမှန်း သိလိုက်ကြရတာလို့ ဆိုပါတယ်။
သူတို့နှဈဦးဟာ အငျတာနကျက ဖူးစာရှငျရှာဖှရေေး ဝကျဆိုဒျကနေ တဈဆငျ့တှဆေုံ့ပွီး လကျထပျခဲ့ကွတာ ဖွဈပါတယျ ။ သူတို့နှဈဦးဟာ ငယျစဉျကတညျးက တှဖေူ့းခွငျး မရှိကွတဲံ မွေးအဖိုးတှပေါ ။ လကျထပျပွီး သုံးလအကွာမှာ ငယျစဉျက မိသားစု ဓါတျပုံတှေ ကွညျ့ကွရာကနေ သူတို့နှဈဦးဟာ မွေးအဖိုးတျောစပျနမှေနျး သိလိုကျကွရတာလို့ ဆိုပါတယျ။
အခုလိုဖြစ်ရပ်ကြောင့် သူတို့နှစ်ဦးလုံး အတော်လေးကို အထိတ်တလန့်ဖြစ်ခဲ့ကြရပေမယ့် ကွာရှင်းမှာတော့ မဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ် ။ သူတို့အကြောင်းကို ဖော်ပြတဲ့ သတင်းမှာလည်း သူတို့နာမည်ကို မဖော်ပြထားပါဘူး ။ အဖိုးဖြစ်သူကတော့ မြေးဖြစ်သူရဲ. ဓါတ်ပုံကို အင်တာနက်မှာ တွေ့စဉ်ကတည်းက ရင်းနှီးမှုကို ခံစားခဲ့ရကြောင်း ဆိုပါတယ်။
အခုလိုဖွဈရပျကွောငျ့ သူတို့နှဈဦးလုံး အတျောလေးကို အထိတျတလနျ့ဖွဈခဲ့ကွရပမေယျ့ ကှာရှငျးမှာတော့ မဟုတျဘူးလို့ ဆိုပါတယျ ။ သူတို့အကွောငျးကို ဖျောပွတဲ့ သတငျးမှာလညျး သူတို့နာမညျကို မဖျောပွထားပါဘူး ။ အဖိုးဖွဈသူကတော့ မွေးဖွဈသူရဲ. ဓါတျပုံကို အငျတာနကျမှာ တှစေ့ဉျကတညျးက ရငျးနှီးမှုကို ခံစားခဲ့ရကွောငျး ဆိုပါတယျ။
သူက ယခင်တုန်းက အိမ်ထောင်နှစ်ဆက်ရှိဖူးပြီး ၊ မတည်မြဲခဲ့ကြောင်းနဲ့ အခုလက်ရှိ အိမ်ထောင်ကိုတော့ တည်မြဲလိုကြောင်း ဆိုပါတယ်။ မြေးဖြစ်သူ ဇနီးသည်ကလည်း အခုလို မြေးအဖိုးဖြစ်နေခြင်းက ပြန်လည်ကွာရှင်းဖို့  အကြောင်းပြချက် မဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
သူက ယခငျတုနျးက အိမျထောငျနှဈဆကျရှိဖူးပွီး ၊ မတညျမွဲခဲ့ကွောငျးနဲ့ အခုလကျရှိ အိမျထောငျကိုတော့ တညျမွဲလိုကွောငျး ဆိုပါတယျ။ မွေးဖွဈသူ ဇနီးသညျကလညျး အခုလို မွေးအဖိုးဖွဈနခွေငျးက ပွနျလညျကှာရှငျးဖို့အကွောငျးပွခကျြ မဟုတျဘူးလို့ ဆိုပါတယျ။